Bit By Bit - Nkweta
Akwụkwọ a nwere ihe dum ibuot on uka mmekota, ma akwụkwọ a bụ onwe ya a uka mmekota. Nnọọ nanị akwụkwọ a ga-adị ma ọ bụghị ndị na-emesapụ aka nke ọtụtụ ndị magburu ndị mmadụ na òtù. N'ihi na, m nke ukwuu ekele.
Ọtụtụ ndị na nyere nzaghachi banyere otu ma ọ bụ karịa n'ime ndị a isi ma ọ bụ ama akp mkparịta ụka na m banyere akwụkwọ. Enwere m ekele n'ebe Solon Baracas, Tom Boellstorff, Clark Bernier, Michael Bernstein, Megan Blanchard, Josh Blumenstock, Dalton Conley, Yo-Yo Chen na Itan Fast, Nick Feamster, Cybelle Fox, Maggie Frye, Sharad Goel, Jake Hoffman, Joana Huey , Patrick Ishizuka, Ben Jones, Dawn Koffman, Sasha Killewald, Harrissa Lamothe, Andrés Lajous, David Lee, Amy Lerman, Meagan Levinson, Andrew Ledford, Dai Li, Karen chepụtara echiche, Ian Lundberg, Xiao Ma, Andrew Mao, John Levi Martin, Judie Miller, Arvind Naranyanan, Gina Neff, Cathy O'Neil, Nicole Pangborn, Ryan Parsons, Devah Pager, Arnout van de Rijt, David Rothschild, Bill Salganik, Laura Salganik, Christian Sandvig, Mattias Smångs, Sid Suri, Brandon Stewart, Michael Szell, Sean Taylor, Florencia Torche, Rajan Vaish, Taylor Winfield, Han Zhang, na Simone Zhang. M ga-amasị na-ekele ụmụ akwụkwọ na Sociology 503 ke opupu 2016 maka ịgụ ihe ndị mbụ version nke-agụ agụ, ụmụ akwụkwọ m ọmụmụ ihe karịrị afọ ndị nyeerela udi ọtụtụ n'ime echiche n'akwụkwọ a.
M nwere ịtụnanya akwụkwọ odide omumuihe na hazie na kwadoro site Princeton si Center for the Study of Democratic Politics. Ga-amasị m na-ekele Marcus Tupu na Michele Epstein iji kwado ogbako. Na, ga-amasị m nile na-ekele n'ime ndị sonyere na onye were oge ha ejikarị ọrụ n'aka na-enyere m mma akwụkwọ: Elizabeth Bruch, Paul DiMaggio, Filiz Garip, Meagan Levinson, Karen chepụtara echiche, Mor Neaman, Sean Taylor, Markus Tupu, Jess Metcalf, Brandon Stewart, Duncan Watts, na Han Zhang. N'ezie bụ a magburu onwe ụbọchị, na m nwere olileanya na m na-na-ọwa ụfọdụ nke amamihe site na ụlọ n'ime ikpeazụ odide.
A ole na ole ndị ọzọ kwesịrị pụrụ iche ekele. Duncan Watts bụ m dissertation ndụmọdụ, na ọ bụ m dissertation nnyocha na mere ka m ghọta otú na-akpali akpali nke a ụdị nnyocha pụrụ ịbụ ihe; -enweghị ahụmahụ na m nwere na akwụkwọ akwụkwọ a ga-adị. Paul DiMaggio bụ onye mbụ na-agba m ume iji dee akwụkwọ a. Ihe niile a bụ otu ehihie na anyị abụọ na-eche na kọfị igwe na Wallace Ụlọ Nzukọ, na m na-echeta na elu ruo mgbe ahụ, echiche nke na-ede akwụkwọ Akananam gafere m n'uche. Mgbe ụfọdụ, mgbe m nọ na n'ezie na-ede akwụkwọ a m bụrụ ọnụ Paul ya aro, ma ugbu a, m na m ekele nnọọ ya maka n'igwa m na m mere n'ezie okwu igwa nakwa na ndị mmadụ ga-enwe mmasị. M ga-amasị na-ekele Karen chepụtara echiche maka ịgụ ihe fọrọ nke nta niile nke isi-ha mbụ na messiest iche-iche; o nyekwaara m aka i chebara ihe mgbe m na-araparawo ata. M ga-amasị na-ekele Arvind Narayanan maka inyere m elekwasị anya na nụchaa arụmụka n'akwụkwọ n'elu ọtụtụ ihe magburu onwe lunches. Brandon Stewart bụ ụtọ mgbe nile ka ikori ma ọ bụ tụlee isi iri, na ya ịghọta na agbamume mere ka m ghara aga n'ihu, na ọbụna mgbe m na-amalite na-kpafuo saidwees. Na, n'ikpeazụ, m ga-amasị na-ekele Marissa King maka inyere m gbagote na aha isiokwu nyere akwụkwọ a otu anwụ na-acha ehihie na New Haven.
Mgbe na-ede akwụkwọ a, m uru site ná nkwado nke ndị atọ dị ịtụnanya oru. Akpa, na Mahadum Princeton, m na-ekele ndị ọrụ ibe m na ụmụ akwụkwọ na Department of Sociology na-eke na ịnọgide na-enwe a na-ekpo ọkụ ma na-akwado omenala. M ga-amasị na-ekele ndị Center for Information Technology Policy na-adụnyere m magburu onwe ọgụgụ isi abụọ n'ụlọ ebe m nwere ike mụta otú kọmputa ndị ọkà mmụta sayensị na-ahụ n'ụwa. Akụkụ ụfọdụ nke akwụkwọ a ebe e dere mgbe m nọ na sabbatical si Princeton. Akpa, m ga-amasị na-ekele Microsoft Research, New York City maka ịbụ ebe obibi m na 2013-14. Jennifer Chayes, David Pennock, na ezinụlọ dum mgbakọ na-elekọta mmadụ na sayensị otu ndị magburu onwe ụsụụ ndị agha na ndị ọrụ ibe. Nke abụọ, m ga-amasị na-ekele Cornell Tech n'ihi ịbụ ebe obibi m na 2015-16. Dan Huttenlocher, Mor Neaman, na onye ọ bụla nọ Social Technologies ụlọ nyocha nyeere eme ka Cornell Tech ezigbo ebe m ka m rụchaa akwụkwọ a. N'ọtụtụ ụzọ n'akwụkwọ a bụ ihe na ijikọta echiche site data sayensị na-elekọta mmadụ na sayensị, na m na-eche na ma Microsoft Research na Cornell Tech bụ ụdị nke ụdị ọgụgụ isi cross-pollination.
Mgbe na-ede akwụkwọ a, m nwere magburu onwe nnyocha aka atọ ndị mmadụ. Enwere m ekele n'ebe Han Zhang, karịsịa maka enyemaka ya na-eme ka grafụ n'akwụkwọ a. Enwere m ekele n'ebe Yo-Yo Chen, karịsịa n'ihi na o nyeere drafting na-eme n'ime akwụkwọ a. N'ikpeazụ, m na-ekele Judie Miller, karịsịa n'ihi na o nyeere agụgharị na nsochi ala nile ụdị ihe n'ọbá akwụkwọ.
M natara na-enye aka nzaghachi ke echiche a akwụkwọ a n'ọtụtụ okwu. Ga-amasị m na-ekele ndị na-ahazi na sonyere na ihe ndị a: Cornell Tech connective Media Nzukọ ọmụmụ, Princeton Center for the Study of Democratic Politics Nzukọ ọmụmụ, Stanford HCI Colloquium, Berkeley Sociology Colloquium, Russell Sage Foundation-arụ ọrụ Group on Computational Social Science, Princeton DeCamp Bioethics Nzukọ ọmụmụ, Columbia quantitative Ụzọ na Social Sciences ileta Ọkà Okwu Series, Princeton Center for Information Technology Policy Technology na Society Reading Group, Simons Institute maka Theory nke Computing Workshop on New Directions na Computational Social Science & Data Science, Data na Society Workshop, University of Chicago, Sociology Colloquium, International Conference on Computational Social Science, Data Science Summer School na Microsoft Research, na Society maka Industrial na Applied Mathematics (Siam) Nzukọ Kwa Afọ.
The web version nke akwụkwọ a e kere site Luke Baker, Paul Yuen, na Alan Ritari nke Agathon Group. Arụ ọrụ na ha na ọrụ nke a obi ụtọ, dị ka mgbe niile. Otu n'ime ọkacha mmasị m ihe banyere anyị oru ngo ọnụ bụ na m na-anọgide na-amụta na anyị collaborations. M ga-karịsịa na-amasị na-ekele Luke n'ihi na emepe emepe Mee usoro maka akwụkwọ a na-enyere m ịnyagharịa n'ọchịchịrị nkuku nke git, pandoc, na-eme ka.
Akwụkwọ a na ịdọkapụta website nke e kere na a ọnụ ọgụgụ nke na-emeghe isi oru ngo. Ga-amasị m ikele ndị nkwado ndị na-esonụ oru ngo: git, pandoc, pandoc-CrossRef, pandoc-citeproc, pandoc-citeproc-preamble, amụma, mgbere, Bootstrap, Nokogiri, GNU Mee, Vagrant, Ansible, latex, na Zotero. All grafụ n'akwụkwọ a e kere ke R (Team 2016) , na-eji ndị na-esonụ nchịkọta: ggplot2 (Wickham 2009) , dplyr (Wickham and Francois 2015) , reshape2 (Wickham 2007) , stringr (Wickham 2015) , ụgbọ ala (Fox and Weisberg 2011) , cowplot (Wilke 2016) , PNG (Urbanek 2013) , okporo (Team 2016) , ggrepel (Slowikowski 2016) , na emojifont (Yu 2016) . M ga-amasị na-ekele Kieran Healy maka ya blog post na ọkọdọ m malitere na pandoc. Na, ga-amasị m ikele Arnout van de Rijt na David Rothschild maka inye data eji recreate ụfọdụ n'ime grafụ ha akwụkwọ, na m ga-amasị na-ekele Josh Blumenstock nke na-eme n'ihu ọha replication faịlụ maka ya akwụkwọ.
Na Princeton University Press, ga-amasị m ikele Eric Schwartz bụ onye kweere na a oru ngo na mmalite, ma Meagan Levinson onye nyeere-eme ka ọ na-eme eme. Meagan bụ ihe kasị mma nchịkọta akụkọ na a onye so dee nwere ike; Adị m ka m na ọ mgbe niile dị n'ebe ahụ na-akwado ọrụ nke a, na mma ma n'oge na mgbe ọjọọ. Na, ugbu a mgbe mụ na onye m na-enye nzaghachi ndị ọzọ, m eme ike m nile ka ọwa Meagan si constructive na ịkpachara anya style.
N'ikpeazụ, m ga-amasị na-ekele ndị enyi m na ndị ezinụlọ. Ị nọwo na-akwadokwa ihe a na oru ngo n'ọtụtụ ụzọ, mgbe mgbe otú ị mere, onye. M ga-karịsịa na-amasị na-ekele nne na nna m, Laura na Bill, na nne na nna m na-iwu, Jim na Cheryl, n'ihi na ha na-agwụcha support mgbe a na oru ngo wee na na na na. M ga-amasị na-ekele m ụmụaka. Eli na Théo, ị jụrụ m ọtụtụ ugboro mgbe m akwụkwọ ga-adị okokụre. Ọma, azịza ya bụ now. Na, ọtụtụ ihe, m na-ekele nwunye m Amanda. Ama m na a oru ngo aka a otutu lee njem, m ga-enwe ekele mgbe nile maka gị mgbe-jijiji ịhụnanya na enyemaka.